I-TBA CHE α-AMY yokuGaya ukutya kweNkqubo yokuKhawuleza kweReagent Kit-Indawo yoVavanyo loKhathalelo-lweSinocare
I-TBA CHE α-AMY yokuGaya ukutya kweNkqubo yokuKhawulezisa iReagent Kit
[imeyile ikhuselwe] Itotali yeBile Acid / iCholinesterase / α-Amylase Reagent Kit yenzelwe ukujonga ubungakanani be-bile acid (TBA), kunye nokulinganisa umsebenzi we-cholinesterase (CHE) kunye ne-α-amylase (α-AMY) kwi-serum yenyama yomntu. Ngokwezonyango, ubukhulu becala isetyenziselwa ukunceda ekufumaneni isifo se-hepatobiliary okanye ukwenzakala, ityhefu ye-organophosphorus kunye nezifo zepancreatic.
I-bile acid iyonke (i-TBA) sisiphumo sokugqibela se-cholesterol metabolism kwisibindi kwaye ikho kwi-enterohepatic circulation. Inxulumene ngokusondeleyo nokufunxwa, imetabolism kunye nohlengahlengiso lwecholesterol. I-Serum TBA sisalathiso esibuthathaka sokuchaphazela ukonzakala kwesibindi kunye nenkqubo yokugaya ukutya. I-TBA ibonakalisa ngokukodwa ukusebenza kwesibindi, njengoko i-TBA inyusa kanye xa kukho i-hepatic cell lesion okanye i-enterohepatic circulation disorder.
I-CHE yiglycoprotein ekhoyo emzimbeni womntu ngohlobo lweesozymes ezininzi. Ukulinganiswa kwemisebenzi ye-CHE yindlela ebalulekileyo enceda ukufumanisa ukunxila kwe-organophosphorus kunye nokuvavanya ukulimala kwesibindi.
α-AMY ifihliwe ikakhulu yi-sialaden kunye ne-pancreas, kwaye inokucocwa yi-glomerulus. Okwangoku, ukufunyanwa kwe-α-AMY yeyona ndlela iphambili yokufumanisa isifo sepancreatitis.
Inkqubo yokuphendula kwisigaba seLiquid, kusetyenziswa iindlela zendlela ekhokelela kwiziphumo ezichanekileyo
I-TBA: 5.0 ~ 180.0 µmol / L